Victoria House Resort & Spa Belize: Oge ezumike Ekele kacha mma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Victoria House Resort & Spa Belize: Oge ezumike Ekele kacha mma
Akụkọ kacha ọhụrụ na Belize • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • nzukọ • News • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Victoria House Resort & Spa, Belize, ebe ntụrụndụ dị n'akụkụ osimiri na-enweta ihe nrite na nnukwu agwaetiti Belizean, Ambergris Caye, nwere obi ụtọ ịnye ihe ndị dị mkpa maka njem ezumike 2021 zuru oke. Na mgbakwunye na ebe obibi dị iche iche a haziri nke ọma, Victoria House Resort & Spa na-enye ọtụtụ ihe omume na ihe egwuregwu, ọgwụgwọ spa na-atụrụ ndụ, yana maka ekele ekele pụrụ iche na paradaịs, nri atọ mara mma.
Ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ oriri Ekele nke ndị isi nri kere na ụtọ ọdịda ọdịda kacha atọ ụtọ.
Ndị njem nwere ike na-atụ anya ịgagharị n'àgwàetiti ahụ n'ụdị dị egwu na ihu igwe dị egwu nke Belize na November.
Na Ambergris Caye, okpomọkụ dị na nkezi 75 ° F, na-eme ka ebe ihu igwe na-ekpo ọkụ bụrụ ihe kachasị mma maka ndị njem na-eche nche n'oge oyi.
"Ebe ezumike ezinaụlọ anyị bụ ezigbo nhọrọ maka onye ọ bụla na-achọ ebe Ekele na-enweghị nchekasị n'afọ a," kwuru. Victoria House Resort & Spa Onye isi njikwa, Janet Woollam. "Na mgbakwunye na ịnụ ụtọ oriri Ekele nke ndị isi anyị ji ụtọ ọdịda ọdịda kacha atọ ụtọ mepụta, ndị njem nwere ike ịtụ anya ịgagharị n'àgwàetiti ahụ n'ụdị ihu igwe dị egwu nke Belize."
Okpomọkụ November na Ambergris Caye - otu n'ime àgwàetiti kachasị mma na Belize, nke dị naanị kilomita 35 site na Belize City - dị na nkezi 75 ° F, na-eme ka ebe ihu igwe na-ekpo ọkụ bụrụ ihe kachasị mma maka ndị njem na-agbapụ n'oge oyi.
Woollam kwuru, "Mgbe ogologo oge nọrọ n'ụlọ ma na-arụ ọrụ site n'ụlọ, ndị ọbịa ga-enwe obi ụtọ ịchọpụta ebe a dị egwu, ebe ha nwere ike ịnụ ụtọ ụbọchị anwụ na mbara igwe na-acha anụnụ anụnụ, ma zuru ike n'akụkụ ọdọ mmiri, snorkel, azụ ma ọ bụ scuba," Woollam kwuru. "Victoria House Resort & Spa bụ ebe pụrụ iche iji nweta mmụọ nke oge ezumike, anyị na-atụkwa anya ịnabata ndị ọbịa n'àgwàetiti ahụ.”
Na ọdọ mmiri na-enweghị ngwụcha, osimiri nkeonwe, yana njem nlegharị anya na ụlọ ahịa Fantasea Dive nke PADI, Victoria House Resort & Spa na-enye nguzozi zuru oke: ebe dị jụụ ebe ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ izu ike yana ọtụtụ ihe egwuregwu na-atọ ụtọ. ezinụlọ dum. Na mgbakwunye na ihe omume ndị dị ka ịgba ígwè, kayak, ịkwọ ụgbọ mmiri, snorkeling, na ịkụ azụ, ndị ọbịa nwere ike inyocha ụlọ arụsị Mayan oge ochie dị nso, gaa zip-lining n'elu ọhịa ọhịa nke nwere ọmarịcha Black Howler Monkeys, sonye na njem mmiri ozuzo, ma ọ bụ gaa na Heritage World Heritage. coral reef maka ahụmahụ mmiri mmiri pụrụ iche.
Ụlọ ezumike nke ụwa-klas na-enye ebe zuru oke iji laghachi azụ ma zuru ike mgbe ụbọchị nyocha gasịrị, ma ndị ọbịa na-ahọrọ ụlọ ndị kwụ ọtọ na ọdọ mmiri nkeonwe haziri maka obere ìgwè na ezinụlọ, ebe okpomọkụ Casitas, nnukwu ọnụ ụlọ oké osimiri, ma ọ bụ ụlọ ndị a na-achọ mma nke ọma na a. ụlọ okpukpu abụọ nke colonial ụlọ. Victoria House Resort & Spa na-enwekwa obi ụtọ igosipụta a spa ọrụ zuru oke na ebe mgbatị ahụ yana ụlọ nri atọ pụrụ iche maka oge ọ bụla.
N'ịbụ ndị a ma ama maka ịkwadebe nri mmiri dị ọhụrụ, nke dị elu na efere nwere ntụgharị mpaghara, Victoria House Resort culinary team akwadebela menu pụrụ iche maka ekele ekele, malite na nhọrọ abụọ maka usoro mbụ: a. salad ube na fennel, walnuts, mịrị amị, na cheese na-acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụ elu ofe ginger karọt na afọ anụ ezi crispy, radish sie, na caramelized apụl. Maka usoro nke abụọ, ndị ọbịa ga-enwe nhọrọ nke pasta eme ụlọ nke ricotta-mmanu anu na sage juru ma jiri obere atụrụ na-esi ísì ụtọ, ọhụrụ snapper fillet kwadebere na ngwa nri na tangy kukumba yogọt ihendori, ma ọ bụ ara toki ṅara n'ọkụ jiri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ agwa casserole na tot nduku ụtọ dị ụtọ na cheese ewu. Pudding toffee na-arapara na vanilla gelato na ihendori bourbon caramel ga-emechi nri ezumike ahụ.
Ịnweta site na ụgbọ elu njem nkeji iri na ise si Belize City, Victoria House Resort na-eme ka ọ dị mfe ịhazi otu mmemme n'ụdị n'ebe dị egwu n'afọ a.
Banyere Victoria House Resort & Spa
N'ịbụ nke dị na Belize na Ambergris Caye, nke kasị ukwuu na agwaetiti Belizean, Victoria House dị nanị kilomita abụọ n'ebe ndịda San Pedro Town mara mma. Ebe ntụrụndụ ahụ na-enye uto nke ọmarịcha ụkwụ efu nke na-eme ka ndị ọbịa na-alọghachi maka ihe ndị ọzọ, yana ọnụ ụlọ ọbịa 42 nwere ụdị ejiji site na ụlọ elu ụlọ elu ruo n'akụkụ ọnụ mmiri nke nwere ọdọ mmiri nkeonwe, ụlọ ụdị ihe ọkụkụ, na ụlọ ngosi oké osimiri. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Palmilla na Admiral Nelson's Bar bụ ndị ama ama maka nri na ihe ọṅụṅụ mara mma nke ọrụ pụrụ iche na-eto. Nleba anya na nkọwapụta nke ndị ọrụ na njikwa enwetala otuto sitere na mgbasa ozi mba ụwa yana onyinye sitere n'aka ụlọ ọrụ ama ama dịka Conde Nast Traveler, Conde Nast Johansens. Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa na Victoria-house.com.